ब्रोकरले दिन खोजेको थप सेवालाई समेत ख्याल गरेर कमिसनका बारेमा निर्णय लिनुपर्छ : सन्तोष मैनाली
काठमाडौं : सन्तोष मैनाली स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्विरोध चुनिएका छन् । गत शुक्रबार भएको एसोसिएसनको २६औं बैठकले उनलाई २ वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनेको हो । यसैबीच, सेयर बजारको विस्तार र विकासका लागि उनको भावी योजनालाई लिएर नेपाली पैसाको लागि इशारा कोइरालाले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :
सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ, के–के छन् आगामी योजना ?
मैले सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि मुख्य ३ वटा योजना अगाडि बढाएको छु । पहिलो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) मा धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिलेको टीएमएस कारोबारको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि अर्डरको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने खालको छ । यसलाई वास्तवमै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली बनाउने र त्यसमा नयाँनयाँ विशेषताहरु थप गर्दै जानु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुन्छ ।
अहिले हामीले ब्रोकरहरुकै संयुक्त लगानीमा टीएमएसको लागि नयाँ कम्पनी बनाइसकेका छौं । अहिले हाम्रो संघको निवर्तमान उपाध्यक्ष टंक गौतमले यो कम्पनीको व्यवस्थापनको लागि निकै खटिइरहनु भएको पनि छ । हमीले बनाउन लागेको टीएमएस मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत पनि सजिलै कारोबार गर्न सकिनेछ ।
उक्त टीएमएसमा सूचीकृत सबै प्रकारका कम्पनीहरुको इतिहास, नेप्से र त्यहाँका सबै सूचकहरुको इतिहासको डाटा राख्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसको आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषण गर्न सक्ने सिस्टमको विकास गर्ने सोच समेत बनाएका छौं । जसले लगानीकर्तालाई लगानीसम्बनधी निर्णय गर्न सक्ने बनाउँछ ।
कारोबार राफसाफ प्रणालीमा रहेको अहिलेको जोखिमलाई कसरी कम गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । दोस्रो, लगानीकर्ताको ब्रोकर माथि थप विश्वास वृद्धि गर्नका लागि लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम चलाउने योजना छ । यसका लागि विशेष किसिमको प्याकेज बनाउने योजना छ । यसले लगानीकर्ता र ब्रोकरबीच आत्मीय सम्बन्ध निर्माण गर्ने अपेक्षा छ ।
तेस्रो, ब्रोकरको कार्यक्षेत्र र दायरा बढाउने योजना रहेको छ । ब्रोकरको सेवालाई मुलुकभर कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने । साथै, बजारमा तरलता बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने योजना बनाइने छ ।
पछिल्लो समय ब्रोकर कमिसन घटाउने कुराले चर्चा पाएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
ब्रोकर कमिसनका विषयमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । यसको एउटा निचोड बोर्डले निकाल्ने नै छ । तर, अहिले लगानीकर्ताले भनेको जस्तो बजार प्रविधिमैत्री बन्दै गएकाले ब्रोकरको लागत र कर्मचारी घटेको अवस्था भने छैन । अहिलेको प्रविधि लगानीकर्तामा मात्रै निर्भर छैन । अनलाइन प्रविधि ब्रोकरको ब्याक अफिससँग लिंक छैन । त्यसैले अहिले अनलाइन आउनु अगाडि भन्दा झन् धेरै कर्मचारीको आवश्यक परेको छ ।
अनलाइन प्रणाली चुस्त नहुँदा यो समस्या आएको हो । अहिले ब्रोकरले प्रविधिको प्रयोग गरेर अघि बढ्नका लागि आफ्नै लगानीमा टीएमएस ल्याउन लागेका छौं । हामी लगानीकर्ताहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिन चाहन्छौं । त्यसको तयारीमा लागेका छौं । हामी अर्डर प्लेसमेन्ट मात्रै नभएर लगानीकर्तालाई अध्ययन गर्न आवश्यक डाटा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं ।
तसर्थ, यस्ता सेवा थप्दा यो कमिसन लगानीकर्तालाई बढी नलाग्न सक्छ । यसका लागि सबै पक्ष बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ । हामीले दिन खोजेको सेवा र भइरहेको कमिसन दरलाई हेरेर निर्णय गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेरेर ब्रोकर कमिसन धेरै भयो भन्दै आएको पाइन्छ । तर, अन्य मुलुकको ब्रोकरको आम्दानीको स्रोत र नेपालको ब्रोकरको आम्दानीको स्रोत पनि हेर्न आवश्यक छ ।
बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हामीले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुन्छ या हुँदैन भन्नुभन्दा पनि नियामकको निर्णय मान्ने हो । यसका लागि अर्थ समितिले नै अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिसकेको छ । यसमा हाम्रो भनाई के हो भने अहिलेको ब्रोकरहरुमार्फत कार्यक्षेत्र र पहुँच विस्तार हुन सकेको छ कि छैन त्यो पनि हेरियोस् भन्ने हो ।
ब्रोकर सक्षम नभएर कार्यक्षेत्र विस्तार रोकिएको हो या होइन त्यो पनि नियामकले हेर्न आवश्यक छ । साथै, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा त्यसबाट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम पनि हेर्न आवश्यक छ । हामीले देखेको इन्साइडर ट्रेडिङ हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सोच्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच कस्तो सम्बन्ध हुन आवश्यक छ ?
लगानीकर्ता र ब्रोकरका बीचमा विश्वासको वातावरण तय ह’न’पर्छ छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता पनि तयार हुनपर्यो र हामी ब्रोकरहरु सधैं त्यसका लागि तयार छौं । अहिले लगानीकर्ताले सेवा प्रवाहलाई लिएर अविश्वास गर्नु भएको होला । त्यसको समाधानका लागि ब्रोकरहरुका तर्फबाट हामीले काम गरिरहेका छौं । कोरोनाकै कहरमा पनि ब्रोकर कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई सक्दो सेवा दिंदै आएका छौं ।
कर्मचारीमा संक्रमणको जोखिम बढ्दा पनि हामीले प्रभावकारी रुपमा सेवा दिंदै आएका छौं । हामी सधैंभरि सेवाको गुणस्तर वृद्धिका लागि काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय धेरै मात्रामा लगानीकर्ताको संघसंगठन खोलिएको छ । यसको खासै अर्थ छैन । लगानीकर्ताको एउटै संगठन भयो भने समन्वय गर्न सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
आव २०७५–७६ मा ८.८% ले घट्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
एनआइसी एसिया लघुवित्तको उत्साहजनक प्रगति : खुद नाफा २४७.९३% ले बढ्यो
केन्द्रीय बैंकले सुरु गर्यो अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने व्यवस्था, यसरी गर्न सकिन्छ दर्ता
निःशुल्क डेमो सेसन शुक्रबार हुँदैछ : स्मार्ट वेल्थ प्रो बाट कसरी सेयर विश्लेषण गर्ने ?
ज्योति विकास बैंकको नाफामा ३८.१८% बढोत्तरी